Blog - Cunnooyinka giraangiraha
Blog: Adeeg Dheeraad ah
Iyada oo qiimaha gaasku uu gaadhay heerarkii ugu sarreeyey, waxaanu ku siinaynaa fursad aad ku taageerto mutadawiciinta Cunnooyinka Gaaska adigoo ku deeqaya kaararka gaaska.
Qalliinka wadnaha ka dib, Jim wuxuu ka walwalay inuu joojiyo waxa uu ku tilmaamay "shaqada ugu fiican adduunka." Kadib saaxiib ayaa soo galay si uu u caawiyo.
Weydii khabiir: Maxay muhiim u tahay la dagaalanka go'doonka bulshada
Waxaan kala hadalnay Erica Berger, daaweeye shati u leh Allina Health, arrinta ku saabsan go'doominta bulshada iyo sida ay ula xiriirto shaqada Cunnooyinka Gawaarida. Digniinta Qaswadayaasha: Marka aad bulshada ku caawinayso tabaruc, maaha kuwa aad u adeegayso oo keliya kuwa ka faa'iidaysanaya.
La Wadaag Dhacdada Jacaylka mar kale waxtarka Cunnooyinka Wheels
Mar labaad, haddii aad suuqa ugu jirto gaari cusub, waxaad sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa nolosha Cunnada la siinayo dadka qaata els
Fursad si wada jir ah ula wadaagta farxadda fasaxa dadka qaata cuntada
Fasaxyadu waa wakhti farxad leh, laakiin sidoo kale waa wakhti dadka qaar ee aanu u adeegno ay dareemaan inay yihiin go'doon. Waxaan weydiineynaa...
Sida looga qayb-qaato Cunnooyinka Taaga-gacmeedka Xiligan Mahad-celinta!
Thanksgiving ayaa ku dhow geeska waxaananu galaynaa wakhtiga ugu mashquulka badan sanadka! Wax ka baro sida aad uga qayb qaadan karto oo aad u taageeri karto Cuntooyinka…
Sii wadista Cunnooyinka Dhaqanka Cidhibta 2021 -ka!
Ogosto 10, 2021
Sababtoo ah masiibada awgeed, waxaan qaadannay go'aanka adag inaan ka tagno martigelinta kulan ballaaran sannadkan waxaanan xoogga saari doonnaa samaynta Cuntada…
La soco: Cunnooyinka gargaarka xilliga COVID-19 waa u sii socon doonaan dadka waaweyn ee 50+ -ka ah
Maarso 22, 2021
Barnaamijyada Cunnada ee Magaalooyinka Mataanaha ah waxay sii wadi doonaan inay siiyaan COVID-19 cunno gargaar dadka waaweyn ee jira 50 +. Shaqsi kasta oo jira 50 ama ka weyn oo wajaha…